ODUU ISPOORTIITI:Dhumaa Foddaa Ammajjii jala kileboota Inglaand: Sanchez-Arsenal, Bryan Oviedo and Darron Gibson- Sunderland, Philippe Coutinho- Liverpool, Ricardo Rodriguez-Chelsea:Gammachiis Gammadaa Abdiisaa – Beekan Guluma Erena
ODUU ISPOORTIITI:Dhumaa Foddaa Ammajjii jala kileboota Inglaand: Sanchez-Arsenal, Bryan Oviedo and Darron Gibson- Sunderland, Philippe Coutinho- Liverpool, Ricardo Rodriguez-Chelsea:Gammachiis Gammadaa Abdiisaa	Beekan Erena
Language Category, Personal Category, Politics Category January 25, 2017January 28, 2017OROMO STRUGLE
Dhumaa Foddaa Ammajjii jala kileboota Inglaand: Sanchez-Arsenal, Bryan Oviedo and Darron Gibson- Sunderland, Philippe Coutinho- Liverpool, Ricardo Rodriguez-Chelsea
Gammachiis Gammadaa Abdiisaa
Foddaa jia Amajjii irrattii banamee xumuramuuf deema jiruu irraatti taphattoota garee kubbaa millaa Awuroppaa tokkorraa gara kan birattii darbuuf carraa hidhaata dhumaa qabaan jedhamaani hamataman ammaaf kan bekamaan muraasadha. Maaddii keenya BBC , Daily mail , Mirror fi Telegraphy wabeeffachuun akkaa armaan gadittii caqasuuf yaalera.
Gareen kubbaa millaa Sunderland (“Black Cats”) kan David Moyes’n lenjifamuu taphattoota garee Everton muraasa waliin hidhaata akkaa qabaan hamatamaa jiru . David Moyes umuriin isaani gannaa 62 kan tahee ammaa garee kubbaa millaa Sunderland waliin sadarka dhumarraa mixachuun argamuu. David Moyes, taphaata ittisaa gaha dhabuun sadarka ammaa jiraniif sabaaba jedhanii kan shakkan, Lescott taphata Mancity fi Everton duraani mallattessisun rakkoo isaani furuu ni mala jedhamee egaama. Lescot lakk 15 uffatee garee Sunderland’f akka taphatuus bekameera. Moyes, kan abdi kutaatan fakkataniis taphata isaani duraan Everton ittii lenjiisa turaan ammas kileebima sanattii argamu bakke ittisarra kan taphatuu Phil Jagielka malattesiisu barbaadanis amansiisu dadhabaan jedhaa HITC Sport. Jagelika, Lenjisaa isaa ammaa jalaatti bakkee(carraa) David Moyes, taphaata ittisaa gaha dhabuun sadarka ammaa jiraniif sabaaba jedhanii kan shakkan, Lescott taphata Mancity fi Everton duraani mallattessisun rakkoo isaani furuu ni mala jedhamee egaama. Lescot lakk 15 uffatee garee Sunderland’f akka taphatuus bekameera. Moyes, kan abdi kutaatan fakkataniis taphata isaani duraan Everton ittii lenjiisa turaan ammas kileebima sanattii argamu bakke ittisarra kan taphatuu Phil Jagielka malattesiisu barbaadanis amansiisu dadhabaan jedhaa HITC Sport. Jagelika, Lenjisaa isaa ammaa jalaatti bakkee(carraa) dhabuyyuu , affeerraa Leenjisa isaa duranii didee jedhaa maddi keenya. David Moyes garee isaani duranii Everton kessaa jiraan fidaani Sunderland kessaatti ijaaruuf waan kahaan fakkata. Maddii keenya Maily online akkaa jedhuttii, Moyes carraa dhumaa cufaamu foddaa Amajjii duraa ammas taphattoota Everton lama Bryan Oviedo and Darron Gibson bituuf gafatan.
Gareen kubbaa millaa Crystal Pallace kan Norwood Kibbaa, London ammaa sadaraka 18’ffaa irraa kan jiruu, lenjiisa isaa haara Sam Alydrace wajjiin qabsoo ulfaattuu kessaa jiruu. Sadarkaa “Crystal Palace” foyyessun Premiur Legue kessattii qusaachuuf kan dhamahaa jiraan Sam Allydrace taphaata Arsenal kan bakkee ittiisa irraa xaphatuu Carl Jenkinson bituuf gafaatani. Sanabata xiqqaa darbee ergaa garee Evertonin injifamatanii, Lenjisaan Sam Allardyce bakkee ittisaa dadhabaa qabachuun waan jara cephasisee fakkata. Kanaafu,garee ittisaa isaani cimsuuf taphata ittisaa Van Aanholt, Sunderland irraa mallattessisun milkahaniruu. Itti dabalee, Guardian maxxansasaa Facaasa, 24/2017 maxxanseen, Christopher Samba Taphataan bakkee ittisarraa taphatuu ergaa Kilebiin Girikii Panathinaikos’iin gadii dhifaame Leenjisaa Allardyce dhaan afferamee ammaa shakaala egaaleera. Yann M’Vila taphataan Sunderland duraanii, ammaa kilebii Rubin Kazan, Russia jiruu Crystal Pallace mallattesissuf sochii egalaaniruu.
Sadarkaa “Crystal Palace” foyyessun Premiur Legue kessattii qusaachuuf kan dhamahaa jiraan Sam Allydrace taphaata Arsenal kan bakkee ittiisa irraa xaphatuu Carl Jenkinson bituuf gafaatani. Sanabata xiqqaa darbee ergaa garee Evertonin injifamatanii, Lenjisaan Sam Allardyce bakkee ittisaa dadhabaa qabachuun waan jara cephasisee fakkata. Kanaafu,garee ittisaa isaani cimsuuf taphata ittisaa Van Aanholt, Sunderland irraa mallattessisun milkahaniruu. Itti dabalee, Guardian maxxansasaa Facaasa, 24/2017 maxxanseen, Christopher Samba Taphataan bakkee ittisarraa taphatuu ergaa Kilebiin Girikii Panathinaikos’iin gadii dhifaame Leenjisaa Allardyce dhaan afferamee ammaa shakaala egaaleera. Yann M’Vila taphataan Sunderland duraanii, ammaa kilebii Rubin Kazan, Russia jiruu Crystal Pallace mallattesissuf sochii egalaaniruu.
Liverpool taphataa isaa lammumman Brazil tahee Philippe Coutinho kontraata isaa dherressun hanaga 2020 ittii mallattessisuun isaa bekaame. Jurgen Klopp leenjisaan garee Liverpool, taphaata isa kana Coutinho irraa deddebihee dinqisifachurra darbee Addunyaan taphataa taphattotaa bebbekamoo bakkaa buhaan argachaa jirtii jedhee dhadaate. Maxxansii Portugal as baha jiruu akkaa ibsuttii taphataan Lisbon William Carvalho kileebi Englandii Liverpool wajjiin haasa jalqabeera jedhaa . Barruun Portugal A Bola akkaa jedhuuttii taphaata kanaaf euro miliiyoona 26 gafaatee jedha kilebiin Lisboon.
Kileebonnii guguddoon London lamaan Chelsea fi Arseenal akkasumaas Kilebiin kubbaa millaa Faransayi Marseille ijaa isaanii taphaata Wolfsburg kan lammummaan isaa Switzerland ta’ee Ricardo Rodriguez irraa bufaatan. Taphataan kun dhumaa Bundesliga irraattii akka gadidhisuu bekaameera. Wolfburg Euro milliona 24’n taphataa kana gurguruuf akka barbaduus himaame. Kana itti anuun abbaan qabeenya kileebii Marseille billiyeenner “Frank McCourt” taphataa kana Marseille qubachisuuf qophii akkaa tahaan dubbatan.
Gareen kubbaa Southampton taphaata fulduura Nappoli, irraa debiuun akkaa fedhii bituu qabaan gaaffii dhiyessaan. Taphataan fulduraa Nappolii Manolo Gabbiadini , leenjisa Claude Puel dhaan hedduu hawwatameera ergaa taphataan isaani Charlie Austin sababa midhaaman tapharraa jia tokkoo ol fagaachuu maluuf. Southampton taphataasa isaa Oriel Romeu turtii isaa wagga afuur fi jia jahaaf haressee jedha barruun Mirror.
Taphataan Arsenal , Granit Xhaka ergaa namuusan irraa deddebihe himatamee fi yeroo darbee kardii dimaadhan bahee booda taphataan kun gara kileebii Porto ittii imaaluu mala jedhaa barruun Portugaal wabeffatee A Bola jedhamuu. Kanarraa kahuun, Arsen winger, Mohamed Elneny’s mallattessisuu maluu jedhamee hamataama. Alexis Sanchez taphataan fulduura Arseenal turtiin isaa Arseenal kessaa shakkisisadha jedha taphataan Arsenaal duraanii Robert Pires.
Kileebin Swansea fi Hull City taphaata sarara ittisaa Intermilan Andrea Ranocchia mallattessuf morki walqabaniruu jedhee maxxaanse barruun Mirror jedhamuu.
Kileebin Hull city morkii kileebii Bayer Leverkusen walin walqabeef taphaata kileebi Genk, Belgium mallattessisuuf Bankii cabsuuf deema jedhaa barruun Mirror. Taphataan Genk umuurinsa 19 tahee , Leon Bailey huddudubaa taphata fulduraa kan taphaatuu, taphaata ijaa kileboota gurguddoo galuu malaan jedhee qeeqa barruun Mirror. Taphataa kanaaf kileebiinsa qarshii Euro milliyoona 17 akkaa gafaate hubatameera.
Odion Ighalo taphataan fulduraa kileebii Watford dhumaa foddaa Amajjii kanattii gara China deema jedhee hamataama jira. Taphataan ittisaa Luis Hernandez kan Kileebi Leicester foddaa Amajjii kanaan kileebi Spain, Malaga’ dhaaf mallattessee.
← SEENAA BARA JIREENYAA JAAL HORAA FAJJISAA!!!Seenaan Gootota keenyaa galmee seenarraa taa’uu qaba!!
Hiriyaa Jaldeessaa Galgalli Hallayyaadha!: Baarentuu Gadaa Irraa: BARRUU DUBBIFAMUU QABUDHA!! →